Odayaasha Gobolka Hiiraan oo halis u galay in la xiro | Dhacdo
Home Wararka Maanta Odayaasha Gobolka Hiiraan oo halis u galay in la xiro
Odayaasha Gobolka Hiiraan oo halis u galay in la xiro
Nabadoon Cilmi Xagar Guure oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Hiiraan ayaa ka waramay halista ay maanta u galeen in lagu xiro Magaalada Beledweyne.
Waxaa uu sheegay in iyagoo 50 odayaal gaaraya ay u istaaggeen, sidii xabsiga looga soo sii deyn lahaa dad labadii habeen ee ugu dambeysay lagu xiray magaaladaasi.
Tani ayuu sheegay inay ku soo aaday, xilli saakay ay magaalada ka socdeen bannaanbaxyo uu sheegay inaanay haba yaraatee waxba kala socon. Bannaanbaxyadaasi ayaana looga soo horjeeday xariga dadakaasi.
“Maalmahaan waxaa ka socday magaalada dibadbax lagu diidan yahay Maamulka Hirshabelle, qolo jabhad ahna waxay joogtaa meel magaalada ka baxsan, hase ahaatee magaalada waxaa ku soo kordhay habeenkii in ciidamo Itoobiyaan iyo Jabuuti la adeegsado, guryihiina laga bixi waayo. Marka dadka habeenkii guryaha loogu dhacaayo ee la xirxirayo ayaa saakay anagoo konton odayaal ah isku nimid, arrintiiyaana xalin weynay. Dad aan dembi gelin ayaa xiran, qofkii dembi galay oo dembi lagu helo waa waajib in la xiro, laakiin dad aan dembi gelin oo shaqo ku lahayn ayaa la xirxiray.” Ayuu yiri Nabadoon Cilmi Xagar Guure oo la hadlay BBC.
Ciidamada Itoobiya iyo Jabuuti yaa dadka u adeegsanayo oo la weydiiyay ayuu yiri “Dabcan maamulkan ayaa u yeeray oo shir la galay, sida la sheegayo shalay iyo doraad miyaa ma aqaan, almuhiim militari ha dhihin, boolis ha dhihin dadka guryaha ayaa habeenkii lagala baxayaa, xabsigaa lagu gurayaa, bannaanbax mar hore dhacaa ku jirtay, jabhaddaa ka tirsan tahay ayaa lagu eedeynaya, cid walba waala iska xirayaa. Marka waxaan xamili weynay dadkaas dhibka loo gaysanayo.”
Su’aal ahayd yaad kala hadasheen oo u dacwooteen oo la weydiiyay ayuu ku jawaabay “Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meel ka sareeyo oo la salaaxo ma jirto, waxaan u tagnay Wasiirkii Arrimaha Gudaha ee Federaalka, isagiina waxaa nala yiri looma taggi karo oo waa hurdaa, 1km ayaan u dhaafi weynay, nin laba xidigle ayaa noo yimid, wuxuu yiri waa hurdaa iska baxa, waana soo baxnay.”
Nabadoon Guure ayaa intaa ku daray “Dadka waa dadkeenii, dhib uma rabno, magaaladuna waa magaaladeenii fowdana ma rabno. Anagu waxaan nahay dad dowlad ku nool ah, Gudoomiyihii Gobolkaa aadnay isagiina waxaa nala yiri waa hurdaa, waan isaga soo noqonay, saldhigii baanu nimid, inta askar naloo soo diraa nala yiri odayaasha laftooda hala xirxiro, waxaan oo dhan ayagaa ka dambeeyee.”
Waxaa uu ayaan-darro ku tilmaamay ayadoo ay magaaladu kacsan tahay inay iska hurdaan masuuliyiintii dowladda ee ugu sareysay ee magaalada joogtay iyo kuwii kale ee gobolkaba.
Mar wax laga weydiiyay inay ku lug leeyihiin bannaanbaxyada ka socda magaalada ayaa wuxuu si adag u sheegay inaanay waxba ka ogayn xitaa bannaanbixii maanta ka dhacay magaalada, oo iyagu ay u socdeen oo keliya, sidii xabsiga looga soo sii deyn lahaa dadka labadii habeen ee la soo dhaafay lagu xirxiray magaaladaasi.
Maamulka Gobolka Hiiraan iyo Saraakiisha Ciidamada Dowladda ayaan weli ka hadlin xaaladda ka soo cusboonaatay Magaalada Beledweyne.
Previous articleMaxaa xigga, hadduu dhammaaday muddo xileedkii Golaha Shacabka?
Next articleXasan Sheekh, Shariif Xasan iyo Qoorqoor oo gaaray Garoowe (SAWIRRO)